Jordania: Ny fifandraisana ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2019 4:58 GMT
Raha mbola manohy ny fanafihany an'i Gaza ny Israeliana, mandeha mihoatra noho ny fanamelohana ny herisetra ireo bilaogera Jordaniana ary mamadika ny tenin'izy ireo sy ny fihetseham-pon'izy ireo ho asa mivaingana. Fanentanana Komity 7iber/Action manangona ireo fanomezana ankoatra izay nomanin'ny mpikarakara azy, araka ny tatitra nataon'ny The Black Iris :
Tsaroako ny nahita ny habetsahan'ny fanomezana nivangongo teny an-tendrombohitra, niparitaka nanerana ny trano fitehirizana azy.
Andro mialoha ny taombaovao ny ampitson'io, saingy nahavita nahazo olona nilaina izahay, tonga tamin'ny fotoana samihafa nandritra ny andro, mba hanampy amin'ny fandaminana ireo fanomezana. Natao nandritra ny efatra andro izany dingana izany.
Miresaka momba ny fanomezana eo amin'ny 40 taonina isika.
Nangonina tao anatin'ny 48 ora daholo izany, na tsy ampy izany ora izany akory aza.
Bilaogera Ali, ankoatra ny hafa, nandray anjara mavitrika tamin'ny fanentanana ary nanome tatitra antsipirihany momba ny hagoavan'ny fanentanana miaraka amin'ireo horonantsarin'ny hetsika.
Nankalazain'ireo orinasa mpanohana ny ezak'izy ireo handefa fanampiana any Gaza ihany koa ny fihetseham-pon'ireo Jordaniana. Jordan Journals manonona ny ezaka ataon'ny Fivarotam-panafody One manangona fitaovam-pitsaboana, izay fisantarana andraikitra avy amin'ilay bilaogera Southern Muslimah. Mitatitra ny 7iber sy ny Komitin'ny Asa fa tsy nahomby ny fanentanana ho an'ny fanampiana nataon'izy ireo raha tsy nisy ny fanampian'ny Aramex, foibem-pivarotana Cozmo, ary ireo fivarotana sakafo sy zava-pisotro isan-karazany izay nanohana azy ireo nandritra ny asa mafy nataon'izy ireo.
Ankoatra ny fandefasana fanampiana ho an'i Gaza, manara-maso akaiky ny fitantarana ataon'ny haino aman-jery mahazatra momba ny toe-draharaha ny bilaogera Jordaniana. Jad namoaka lahatsary ahitana ny tafatafa niarahana tamin'ny mpanjakavavy Noor tao amin'ny CNN, raha namoaka famintinana momba ny fitantarana ny toe-draharaha avy amin'ny fampahalalam-baovao Amerikana kosa i Lina, mpanoratra ao amin'ny bilaogy Into The Wind, Ramzy Baroud indray mitatatata noho ireo fanehoan-kevitra am-bava fotsiny ataon'ny mpitondra manerantany.
Bilaogera hafa kosa mifantoka amin'ny fandraisan'ny governemantany anjara amin'ny fanafihana an'i Gaza. Qwaider manoratra ny fifanarahana fandriampahalemana Isiraeliana-Jordaniana, raha mandrisika ny Jordaniana sy ny Arabo amin'ny ankapobeny mba handray ny andraikiny amin'ny Palestiniana kosa i Tololy. Maneho zava-baovao kokoa i Sha3teely miresaka ireo fihetseham-po ireo amin'ny alalan'ny sariitatra.